$44 milyan oo xukun: Hilton waxaa lagu helay inuu dayacay kiis kufsiga martida ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » $44 milyan oo xukun: Hilton waxaa lagu helay inuu dayacay kiis kufsiga martida ah
Jebinta Wararka Safarka • Crime • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Hilton Americas-Houston Hotel oo ku yaala badhtamaha magaalada Houston
Hilton Hotels waxay ku dhufteen 44 milyan oo doolar oo ah xukun dayacaad ah oo u dhigma fududaynta faraxumaynta martida hoteelka.
Xeerbeegtida Degmada Harris ayaa soo celiyay xukun dhan $44 milyan Hilton Management LLC Kadib markii ay ogaadeen in shaqaalaha hoteelku ay qol khaldan dhigteen marti suuxsan oo nugul, taasoo keentay faraxumaynteeda.
Qareenada ka socda Blizzard Law waxay iskaashi la sameeyeen qareenka maxkamada Michelle Simpson Tuegel si ay u matalaan ka badbaaday kufsiga Kathleen Dawson dacwada ka dhanka ah Hilton Management LLC iyo eedaysaneheeda, Larry Clowers, oo ay wada shaqayn la ahayd Ms. Dawson wakhtiga weerarka.
Xeer-beegtida ayaa isku raacay in dayaca Hilton uu kaalin mug leh ka qaatay dhacdadii March 2017 wuxuuna ku abaalmariyay Ms. Dawson 44 milyan oo doolar kharashaadka caafimaadka, lumay awood shaqo iyo xanuun maskaxeed. Xeerbeegtida ayaa sidoo kale helay Mr. Clowers inuu faraxumeeyay Ms. Dawson. Waxaa la rumeysan yahay in ay tahay xukunkii dayacaadda ugu weyneyd ee kiis kufsi oo ka dhan ah hoteel weyn.
"Marqaati ka noqoshada sida hal kulan uu u bedeli karo nolosha haweeneyda weligeed waa wax laga naxo," ayuu yiri qareen Ed Blizzard. "Garyaqaannadani waxay fahmeen saamaynta curyaaminta ee ay dhacdadani ku yeelatay Marwo Dawson waxayna soo celiyeen xukunkii ugu weynaa ee loo yaqaan dhibbanaha faraxumaynta ee ka dhanka ah koox hoteel weyn. Xukunkaasi waxa uu fariin cad u dirayaa Hudheelada oo ah inay si ixtiraam, daryeel iyo karaamo ku jirto ula dhaqmaan dhamaan martidooda, gaar ahaan kuwa jilicsan”.
Sida laga soo xigtay marag-furka maxkamadda, haweeney mareysay agagaarka hoteelka Hilton Americas-Houston ee ku yaal bartamaha magaalada Houston ayaa wacday lambarka 911, markii ay aragtay nin surwaalkiisa oo aan xirneyn oo siibka ka furan oo dul taagan haweeney itaal daran oo dhulka jiifta. Booliiska ayaa yimid, shaqaalaha hoteelkuna waxay keeneen kursiga curyaanka si ay ugu qaadaan Marwo Dawson, taasoo sakhraansan oo aan awoodin inay la xiriirto ama socon weydo.
In kasta oo Marwo Dawson ay ku haysatay aqoonsi shandaddeeda, haddana shaqaalaha ammaanku waxay ku guul-darreysteen inay go'aan ka gaadhaan inay tahay, run ahaantii, martida qol ku diiwaan gashan magaceeda. Shaqaaluhu waxay sidoo kale ku guuldareysteen inay su'aal ka keenaan sheegashada Mr. Clower ee ah "inay ila jirto."
Xeer-beegtida dacwadda ayaa daawaday muqaal ammaanka Hilton oo muujinaya Ms. Dawson oo ay ilaalada Hilton iyo booliisku u soo galeen qolka Mr. Clower. Marwo Dawson waxay ku baraarugtay in la faraxumeeyay aroornimadii hore ee saaka.
"Siyaasadaha muhiimka ah ee qolka ayaa jira si looga hortago arrintan, laakiin Hilton wuxuu ku guuldareystay inuu raaco xitaa nidaamka asaasiga ah qof kasta oo waligiis degay hoteel wuxuu la kulmay: hubinta aqoonsiga martida diiwaangashan," ayay tiri Anna Greenberg, mid ka mid ah qareennada Ms. Dawson. Weli waxaa ka sii daran, Hilton waxa uu eedaynayay dhibbanaha oo uu garab istaagay ninka lagu eedeeyay kufsiga, in kasta oo la helay muuqaal muuqaal ah iyo caddaymo jireed oo xaqiijinaya weerarka.
Xiritaanka iyada, Ms. Tuegel waxay ku doodday, "Hoteelada Hilton, shirkad leh saraakiil ammaan, siyaasado, iyo agab, shirkad Kathleen ah ayaa lacag siisay si ay u hesho meel ammaan ah oo ay madaxeeda dhigto habeenkii, waxay u gogol xaadhaysaa kathleen faraxumaynta galmoodka markii iyada la geeyey, sida ragdoll ee kursiga curyaanka ee Hilton, ma gelin qol ay iska diwaan galisay oo ay bixisay, laakiin waxay gashay qolkii kufsiga.